महिलाको लामाे कपडा यहाँ सार्वजनिकस्थलमै प्रहरीले काटिदिन्छन् ! – Everest Dainik – News from Nepal
महिलाको लामाे कपडा यहाँ सार्वजनिकस्थलमै प्रहरीले काटिदिन्छन् !
पहिला त्यहाँको स्कूलमा बच्चालार्य धार्मिक कार्यक्रममा भाग लिन रोक लगायो । त्यसपछि पुरुषहरुलाई लामो दाह्री पाल्न (राख्न) प्रतिबन्ध लगाइ दियो । त्यतिमात्रै नभएर सार्वजनिक स्थानमा मुस्लिम महिलालार्य बुर्का लगाउन पनि रोक लगायो ।
अहिले आएर अर्को एउटा नयाँ नियम अगाडि ल्याएको छ । जसमा महिलाहरुलाई लामो कपडा लगाउन रोक लगाइएको छ । यदि यो नियम विपरित कुनै महिलाले लामो कपडा लगाएको पाइए त्यसलाई तत्काल काटिने (छोटो बनाइने) छ ।
चिनियाँ प्रहरीले उइगुर मुस्लिम महिलालाई लामो कपडा लगाउन रोक लगाएको छ । सडकमा यदि उइगुर मुस्लिम महिला लामो कपडामा देखिएमा तत्काल उनको कपडा कैंचीले काटिएको तस्वीरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
ट्याग्स: China, Government, Muslim Women